နှလုံး ဝတ်လွှာချပ်လေးများ | ZAYYA
← ကြားကား ကြား၏ ~ မသိ
အဆုံးသတ် ခဏတိုင် →
စင်စစ် နှလုံးသား ကို ကျနော်တို့ အတွက် လစန္ဒာ နဲ့ တင်စားလိုပါတယ်။ သူက အပြည့်အဝ ထွန်းလင်းနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်၊ စိတ်ကူး၊ မာန၊ ဒေါသတွေကြောင့် အမိုက်တိုက် ဖုံးမိရက်သား ဖြစ်နေတတ်တယ်။ နှလုံးသားက ထင်သလောက် အသက်မဝင်ဘူး။ ကွယ်ပျောက်နေတယ် လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါကို ဆူဖီဆရာများက သိမြင်မှု၊ မြတ်နိုးမှု နဲ့ ဖယ်ရှားတယ်။ Devoted one attention to Allah လို့ ခေါ်မလား ။ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နည်း ဥပမာ ပေးပြီး ပြော ရရင် နှလုံးအိမ်ဟာ ကျနော်တို့ မသိလိုက်ဘဲ ချောင်ထိုးထားမိတဲ့ မှန်တစ်ချပ် ။ – ဒီမှန်ကလေးဟာ အတီတေ ကာလ ကတည်းက မထင်မရှား၊ ရောင်ပြန် မဟပ်နိုင် ဘဲ ပျောက်ကွယ်နေတယ်။ ဒါကို ပြန်ဆွဲထုတ်နိုင်မှ – အကြည်လင်ဆုံး အဖြစ် ပြန်လည် ထားရှိနိုင်မှသာ ဘဝကို အစစ်အမှန် ရှုမြင်နိုင် ပါလိမ့်မယ်။
Sufism ( tasawwuf ) မှာတော့ ဒါကို အဆင့်လေးဆင့် နဲ့ ဖြတ်သန်းပါတယ်။ ( အဆင့်လို့ ဆိုပေတဲ့ – လှေကားထစ်လို တစ်ထစ်ပြီးမှ တစ်ထစ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူးရယ်။ သီးခြားကွဲပြားထားတဲ့ ပွင့်ချပ်လေးချပ်မျိုး ဖြစ်နေတယ်လို့သာ ဆိုလိုတယ် )
Liberating ourselves from the psychological distortions and complexes
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြင်အရှုပ်အထွေး တွေကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းတယ်။ တစ်နည်းဆိုရင် အရှိကို အရှိအတိုင်း အရှင်းလင်းဆုံး မြင်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းတယ်။ အဲ့ဒီ အတွက်လည်း ဆူဖီ ဆရာများဟာ အခုခဏ အပေါ် အာရုံစိုက် ရှုမြင်ထားကြတယ်။ သူတို့ အတွက် စိတ်ကူး၊ သီဝရီ၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ဆန္ဒ တွေဟာ အသုံး မဝင်ဘူးရယ်။
Freeing ourselves from the slavery to the attractions of the world.
ဒီအဆင့်မှာ ရှုမြင်သူဟာ – စိတ်နှလုံးကို အနှောင့်ယှက်နိုင် ဆုံး အရာ ကနေ ခွဲထွက်ပါတယ်။ စင်စစ် ကျနော်တို့ကို အနှောင့်ယှက်နိုင် ဆုံး အရာတွေဟာ ကျနော်တို့ ဒူးထောက် ဦးညွှတ် ထားရပါတယ် ဆိုတဲ့ ကျနော်တုိ့ရဲ့ “လိုဘဆန္ဒ၊ အာရုံတွေ” သာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာဆန်ဆန် စကားလှလှသုံးရင် – သူတို့က ကျနော်တို့ကို “ကျွန်ပြု” ထားတယ်။ ဒီအဖြစ် ကို စင်စစ် သိရှိတဲ့ အခါရောက်မှသာ – မိမိ သန္တာန် ဟာ အလိုအလျောက် တွန်းလှန်ဖို့ ခရီး စတင်ပါတယ်။ အဲ့အခါ ဒီဆန္ဒ အကာအရံ အဆီးအတား တွေ ကို မိမိဘာသာ လိုက်လံ ရှုမြင် လာတယ်။ ရင့်သန်လာရင် ရင့်သန်လာတဲ့ အလျောက် – စိတ်နှလုံး အစွမ်းနဲ့ – သိရှိ၊ ဖယ်သတ်သွားတယ်။ မိမိရဲ့ ရှင်သန် နေထိုင်မှု ဟာ အဲ့ဒီ အချိန် အခါမှာ လိုလားချက် ဆန္ဒတွေ နောက် မလိုက်တော့ဘူး ရယ်။ မိမိရဲ့ အသက်၊ မိမိရဲ့ ဘဝဟာ လိုလားချက်တွေ ပေါ်မှာ မမှီတွယ်ဘူး – မစွဲလမ်းနိုင်တော့ဘူး – အခု ခဏတာရဲ့ လိုအပ်ချက် မျှကလေး အပေါ် မှာသာ မှီတည် နေတော့တယ်။ စင်စစ် အဲ့ဒီ အချိန်အခါမှာ ရှင်သန်နေတဲ့ မိမိဘဝဟာ – ရှုမြင်ထားမှု အသိ၊ သက်သက်က လွဲရင် ကျန်တာ ဘာမှ မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
အတ္တရဲ့ ကန့်လန့်ကာကို ဆွဲခွဲ ထွက်လာ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းဟာ အခက်ခဲဆုံး အပိုင်းလည်း ဖြစ်သေးတယ်။ နေထိုင်မှု ခဏအတွင်း မှာ ကျန်တဲ့ အရာ ဘယ်အရာမှ မရှိရင်တောင် – လူဟာ မိမိရင်တွင်း မိမိ ခိုဝင် ထောက်တည်ထားသေးတယ်။ အနည်းဆုံး မိမိရဲ့ သန္တာန် ဟာ ငုတ်တွယ် ချိတ်ကပ်နေဆဲ ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီကန့်လန့်ကာကို သိမ်မွေ့နူးညံ့တယ် ~ သိရခက်တယ်လို့ မကြာခဏ သွန်သင်ပြရလေ့ ရှိတယ်။ ဒါကို ဘဝနေထိုင်မှု အတွင်း ရှုမြင်မှု သက်သက် တည်ရှိ လာနေဖို့သာ လိုအပ်ပါတယ်။ ရင့်မှည့် လာတဲ့ အခါ – မိမိရဲ့ တည်ရှိမှု သန္တာန် သက်သက်ကပါ ရုတ်ခြည်း ဆိတ်သုဉ်း သွားတယ်။ ( တနည်း ) နကိုကတည်းက မရှိ – ဆိတ်သုဉ်းနေကြောင်း သိမြင် သွားတယ်။ ဇင် အရ ဒီနေရာဟာ ဆာတိုရီနဲ့ အထိုက်အလျောက် တူညီမယ်လို့ ကျနော် ဆိုချင်ပါတယ်။
Devoting oneself and one’s attention to Allah: living in and through Allah.
နောက်ဆုံး တည်ငြိမ်၊ သေဝပ်သွားတဲ့ အရာက ဘုရားသခင်နဲ့ ထိတွေ့သက်ဝင် သွားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလေးချက်ဟာ တစ်ဆင့်ပြီးမှ တစ်ဆင့် ရယ်လို့ မဟုတ်ဘူး – တစ်ခု ပြည့်ဝရင် ကျန်လေးခုဟာ တွဲဖက် ပြည့်ဝလာတယ်။ တစ်ဆင့်ချင်း ကျော်ဖြတ် တာမျိုး မဟုတ်ဘူး လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ ဒါကို – ဘုရားသခင်နဲ့ ထပ်တူ သက်ဝင်နေထိုင်ခြင်း၊ အလ္လာနဲ့ တစ်သား တည်း ဖြစ် တည်ခြင်း၊ မေတ္တာ နဲ့ ပြည့်ဝ သွားခြင်း – စသည် ဘယ်လို ဆိုဆို – မိမိ နှစ်သက်သလို ခေါ်ဆိုနိုင်တယ်။ အနှစ်အားဖြင့် – မိမိစိတ်နှလုံးကို အကြည်လင်ဆုံး ရှင်းထုတ် ဖြစ်တည် သွားနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကိန်းဝပ် သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ရဲ့ သန္တာန် ဟာ ကြည်လင်မှု သက်သက် သာ တည်ရှိနေတော့တယ်။ သူ့ရဲ့ နေထိုင် ရှင်သန်မှု ဘဝမှာ – ချမ်းမြေ့တဲ့ မေတ္တာဓာတ် -အကြည်သားက လွဲရင် – လူ၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အယူဝါဒ၊ ဂိုဏ်းဂဏ မရှိ။ — ခံယူချက်၊ အစွဲ အလမ်း၊ စကား၊ ဝေါဟာရ မသိ။ — အခြား ဘယ်အရာမှ မတွယ်ညိ၊ မသက်ရောက် ။– ဘာမှ ပိုင်းဖြတ် ခွဲခန့်စရာ မလိုအပ် တော့ဘူးလို့ ဆိုလိုတယ်။
Ref: Sufism – Purification of the heart.